सूचना प्रविधि – Next World Online
Next World Online > सूचना प्रविधि
चाबी ठोकेर गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ ? फेसबुकमा नलेखौं !
१८ असोज, काठमाडौं । दशैंका बेला शहरमा रहेको डेरा वा घरमा तालाचाबी ठोकेर गाउँतिर जाने चलन अधीक छ । यस्तो बेलामा रित्तो घरमा चोर छिर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता घरबेटी र प्रहरी दुबैलाई हुन्छ । यसै सन्दर्भमा हामीले केन्द्रीय…
एक अनुसन्धानले बताए अनुसार हरेक व्यक्तिले एक दिनमा कम्तीमा दुई घण्टा सोसल मिडियामा बिताउँछन् । अझ सोसल मिडियाका एडिक्टहरूले त त्योभन्दा बढी नै समय मोबाइलमा बिताउँछन् । गेम खेल्न, च्याट गर्न, कल गर्न मात्र होइन सोसल मिडियाबाट मनग्गे पैसा…
आरडीटि होइन पिपिआर प्रबिधिबाट मात्र परिक्षण गराऊँ: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरस संक्रमण यकिन गर्न आरडीटी प्रविधि भरपर्दो नभएकाले देशभर पीसीआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गर्न/गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अरू देशको अनुभवबाट समेत आरडीटी प्रविधि विश्वासिलो नरहेका देखिएको…
टेलिकमले नै नि:शुल्क भ्वाइस प्याक देखि एसएमस र डेटा दिदै !!
मोबाइलमा पैसा सकिएकाहरुको लागि नेपाल टेलिकमले सित्तैको सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । लकडाउनको कारण रिचार्ज कार्ड किन्न नपाएका या विद्युतीय भुक्तानीमार्फत कुरा गर्न र ईन्टरनेट चलाउन नपाएकाहरुलाई टेलिकमले निःशुल्क सेवा दिन लागेको हो । ब्यालेन्स शून्य भएको र…
बिहिबारसम्म हावाहुरी, चट्याङ र असिनासहित वर्षा हुनसक्ने (३ दिनको जानकारी)
काठमाडौं । आज (मंगलबार)देखि बिहीबारसम्म हावाहुरी, चट्याङ र असिनासहित वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज पनि देशका धेरै ठाउँमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना छ। साथै हावाहुरी, चट्याङ र असिनाको पनि उत्तिकै सम्भावना छ। ‘अहिले पनि…